OTU ESI AGBANWE USORO AKWUKWO N'IME OKWU - OKWU - 2019
Gbanwee usoro ojiji na Microsoft Word
Mkpa ịgbanwe ọdịdị usoro na MS Okwu adịghị emekarị mgbe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na achọrọ ime nke a, ọ bụghị ndị ọrụ niile nke usoro a ghọtara otu esi eme ka okpukpu ma ọ bụ karịa.
Site na ndabara, Okwu, dị ka ọtụtụ ederede ederede, na-enye ike ịrụ ọrụ na ọkọlọtọ A4, ma, dị ka ọtụtụ n'ime ndabara ntọala n'usoro ihe omume a, a pụkwara ịgbanwe ngwa nhazi ngwa ngwa. Ọ bụ banyere otu esi eme nke a, a ga-atụlekwa ya n'isiokwu a dị nkenke.
Ihe omumu: Otu esi eme ka nhazi akwukwo ala di na Okwu
1. Mepee akwụkwọ nke onye ị chọrọ ịgbanwe. Na ngwa ngwa ọhụụ, pịa taabụ "Nhazi".
Rịba ama: N'asụsụ ndị okenye nke nchịkọta ederede, ngwaọrụ ndị dị mkpa iji gbanwee usoro dị na tab "Ntọala Page".
2. Pịa bọtịnụ ahụ "Size"emi odude ke otu kiet "Ntọala Ntọala".
3. Họrọ usoro kwesịrị ekwesị site na listi na menu adaala.
Ọ bụrụ na otu n'ime edepụtara anaghị adabara gị, họta nhọrọ "Ụdị akwụkwọ ndị ọzọ"wee mee ihe ndị a:
Na taabụ "Akwụkwọ Size" windo "Ntọala Ntọala" na ngalaba nke otu aha ahụ, họrọ usoro kwesịrị ekwesị ma ọ bụ tọọ akụkụ ya aka, na-akọwa obosara na ịdị elu nke mpempe akwụkwọ (gosiri na centimeters).
Ihe omumu: Otu esi eme usoro A3
Rịba ama: Na ngalaba "Ihe Nlereanya" Ị nwere ike ịhụ ihe atụ bara uru nke otu peeji nke ị na-emegharị.
Nke a bụ ụkpụrụ ụkpụrụ nke usoro mpempe akwụkwọ ugbu a (ụkpụrụ dị na centimeters, obosara nke dị elu):
A5 - 14.8x21
A3 - 29.7942
A2 - 42x59.4
A1 - 59.4984.1
A0 - 84.1х118.9
Mgbe ị banyere ụkpụrụ a chọrọ, pịa "OK" imechi igbe.
Ihe omumu: Kedu ka Okwu si mee ụdị mpempe akwụkwọ A5
Ọdịdị nke mpempe akwụkwọ ahụ ga-agbanwe, jupụta ya, ị nwere ike ichekwa faịlụ ahụ, zite ya site na e-mail ma ọ bụ bipụta ya. Nke a ga - ekwe omume naanị ma ọ bụrụ na MFP kwadoro usoro ihuakwụkwọ ị kwuru.
Ihe omumu: Mbipụta akwụkwọ na Okwu
Nke ahụ bụ, n'eziokwu, ihe niile, dịka ị pụrụ ịhụ, ịgbanwe usoro nke mpempe akwụkwọ na Okwu abụghị ihe siri ike. Mụta nchịkọta ederede a ma bụrụ ndị na-arụ ọrụ, ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ na ọrụ.